yankyaw၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
အင်္ဂါလေးပါးပြည့်စုံလျှင် ဒုတိယဘ၀မှာ ကိစ္စပြီးပုံ
ဒီဘလော့ကို သြဂုတ် 16, 2012 တွင်12:30am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment2Likes
သဗ္ဗညုတဥာဏ်တော်ကြီးနဲ. တရားနာတဲ.ပုဂ္ဂိုလ်၊ တရားတွေ သရဇ္ဈယ်တဲ.ပုဂ္ဂိုလ်၊ တရားတွေ နှလုံးသွင်းတဲ. ပုဂ္ဂိုလ်၊ တရားတွေမြင်လိုက်သဖြင်.
ငါ ငါ.ဥစ္စာ မရှိဘူးလို. သိတဲ.ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဒီဘ၀မှာ အလုပ်လုပ်လို.…
ဒီဘလော့ကို သြဂုတ် 12, 2012 တွင်4:23pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments0Likes
စသောအကြောင်း၎ပါးဖြင့်ပြည့်စုံပါက ယခုဘဝတရားထူးမရစေကာမူ နောင်ဘဝတွင် နတ်ပြည်တွင် သောတာပန်မှအစပြုပြီးတရားထူးများရနိုင်ပါသည်။
(၁) နတ်ပြည်ရောက်ချိန်တွင်နတ်ြ့ပည်ရောက်မှန်းမသိပဲ တရားကိုဆက်လက်အားထုတ်ရာမှတရားထူးရရှိခြင်း…
9:35pm အချိန်ဖေဖော်ဝါရီ 19, 2015, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
2:15pm အချိန်ဖေဖော်ဝါရီ 19, 2013, တွင် ♣တောသူမလေး♣ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
12:40am အချိန်အောက်တိုဘာ 24, 2012, တွင် သားငယ် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
12:34am အချိန်အောက်တိုဘာ 24, 2012, တွင် သားငယ် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
3:57pm အချိန်သြဂုတ် 17, 2012, တွင် အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
12:40am အချိန်ဇန်န၀ါရီ 11, 2012, တွင် နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
6:32pm အချိန်ဇန်န၀ါရီ 10, 2012, တွင် hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ညီလေး လာလည်ပါတယ် စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျမ်းမာပါစေ